Thursday, 21 June 2012 16:09	नागरिक
छुनलाई होइन हेर्न चाहिँ पाइन्छ,
आँखालाई सेक्न जति नि पाइन्छ।
नेपाली फिल्ममा को कसरी हिट हुन्छ, ठ्याक्कै ठम्याउन गाह्रो छ। कसैको त्यही काम गरेर पूरै जिन्दगी बित्छ र पनि ऊ कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन। कोही एक चोटिकै प्रयोगले चर्चाको केन्द्रबिन्दु हुन्छन्। अहिले चर्चामा रहेकी नवनायिका सुषमा कार्की सुन्दरी मात्र होइन, सुरी पनि छिन्। उनको 'उध्रेको चोली' आइटमले चर्चाको शिखर चुमेको छ।
बोल्ड सिनले फिल्मबजार तताएकी उनको अनस्त्रि्कन बोल्डनेसको रहस्य थाहा पाउने रहर सबैलाई हुन्छ। यो अस्वाभाविक होइन। उनको अनस्त्रि्कन अभिनयलाई बजारले बलिउडकी मल्लिका शेरावतसँग तुलना गर्न थालेपछि उनको महत्‍व ह्वात्तै बढेको छ। रियल लाइफ र रिल लाइफमा कतिको समानता छ? सुषमा कार्कीसँग स्वरूप आचार्यले गरेको अन्तरंग कुराकानी :
म र मेरो फोटोग्राफर मित्र विजय गजमेर सुषमासँग अन्तरवार्ता लिन जाँदा बाटोमा ऊ मलाई बताउँदै थियो, 'खासै बोल्न आउँदैन उसलाई। अलिक घमण्डी टाइपकी छे।' सुनेर म केही चिसो भएँ। तर, पूरै हतोत्साहित भने थिइनँ। केही न केही बोलिहाल्छिन् भन्नेमा विश्वस्त थिएँ। हामी उनको घर पुग्दा उनी कुर्तासलवारमा सजिएर हामीलाई पर्खिरहेकी थिइन्। उनलाई देख्नेबित्तिकै मेरो मनमा उब्जेको पहिलो प्रश्न थियो, 'के यो नै 'उध्रेको चोली' हो?' हामी बाहिर बगैँचाको कुनामा बस्यौँ।
सुषमाजी, के छ खबर? हिजोआज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त?
ठीक छु। अहिले भर्खरै 'बिन्दास' भन्ने फिल्म सकाएँ। केही म्युजिक भिडियो गर्दै छु। त्यही हो।
नाम त खतरनाक रहेछ फिल्मको। कस्तो क्यारेक्टर छ नि तपाईँको यो फिल्ममा?
फिल्ममा मेरो क्यारेक्टर बिन्दास केटीको छ, जो रमाइलो गर्न मन पराउँछे । रमाइलो गर्न ऊ जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि हट्दिनँ। फिल्ममा मेरा दुईटा ब्वाइफ्रेन्ड छन्। उनीहरूसँग म घरमा ढाँटेर भागी-भागी डिस्को जान्छु, घुम्न जान्छु, मस्ती गर्छु। म वास्तवमै बिन्दास केटी छु फिल्ममा।
अनि रियल लाइफमा चाहिँ कत्तिको बिन्दास हुनुहुन्छ?
फिल्ममा जत्तिको बिन्दास त छैन। त्यो हुन पनि मिल्दैन। रियल लाइफमा म एकदमै कम बोल्छु। ढाँटेर बाहिर जान्नँ। सुरुसुरुमा ढाँटेर सुटिङमा धेरै गएकी छु। तर, त्यो त बदमासी हैन नि? (उनले हामीलाई आश्वस्त पार्न खोजिन्।) म अलिक रोगी छु। तीनपटक त टाइफाइड नै भइसक्यो। अस्ति केही महिना पहिला स्पाइनल कर्डको हड्डी डिस्प्लेस्ड भएर दुई-तीन महिना बेड रेस्टै गर्नुपर्‍यो। बिरामी भएको बेलामा पनि सुटिङ गर्नुपर्‍यो भने भागेरै जान्थेँ। त्यही हो।
तपाईँ फिल्म क्षेत्रमा कसरी आकर्षित हुनुभयो? केले तान्यो?
मेरो मामा प्रोड्युसर होइसिन्छ, प्रभुशमशेर राणा। उहाँले 'मेरो एउटा साथी छ' बनाउँदा सानो रोल छ खेल्छ्यौ भनेर सोधिस्यो। मैले पनि हुन्छ भनेँ। त्यसपछि अरू फिल्ममा पनि अफर आउन थाले। खेलुँ-खेलुँ लाग्यो, खेलेँ।
भनेपछि कुनै प्लानिङ गरेर आएको होइन?
प्लानिङ गरेर आएको त होइन। बच्चैदेखि नक्कल गर्न, नाच्न मन पर्थ्यो। हिन्दी फिल्म खुब हेर्थेँ। डाइलगहरू कण्ठस्थ पार्थेँ र सबैलाई सुनाउथेँ। फिल्म त मन पर्थ्यो। तर, हिरोइन नै बन्छु भन्ने चाहिँ थिएन। फिल्मभन्दा बढी टेलिभिजनतिर देखिने रहर थियो।
फिल्ममा आउनुअघि मोडलिङ गरियो कि नाइँ?
नाइँ। एकपटक एउटा पत्रिकाको ब्लोअपका लागि फोटो सुट गराएको थिएँ, त्यत्ति हो। त्यतिखेर त म बच्चै थिएँ। घरबाट त्यतिखेर सपोर्ट गर्सिन्नथ्यो।
अहिलेसम्म तपाईँले जति पनि मुभी गर्नुभयो, सबैमा बोल्ड क्यारेक्टरका रूपमा देखिनुभएको छ।
त्यो कसैले प्रोजेक्ट गरेर हुने कुरा होइन। स्त्रि्कप्टले के भन्छ भन्ने कुरा हो। सबैभन्दा पहिले त म स्त्रि्कप्ट पढ्छु र मेरा साथी र हितैषीलाई सोध्छु। अनिमात्र फिल्म साइन गर्छु। सबै फिल्म साइन गरेको भए त अहिलेसम्म २०/२५ वटा पुगिसक्थ्यो। मैले 'के यो माया हो' गरेँ, त्यो लिभिङ टुगेदर रिलेसनसिपमा आधारित थियो। 'ब्याच नम्बर १६' मा खलपात्रको भूमिकामा देखा परेँ। 'नयाँ नेपाल'मा विधवाको क्यारेक्टर गरेकी छु। यस्तै नयाँ क्यारेक्टरमा फिल्म गर्न मन पर्छ। के गर्नु? नयाँ क्यारेक्टर भनेपछि अलिक बोल्ड त भइहाल्छ। त्यो घिसिपिटी लभ मुभी त मन पर्दैन मलाई, छ्या!
बोल्ड सिन दिइसकेपछि फेमिलीको अब्जेक्सन आउला। के होला जस्तो लाग्दैन?
त्यस्तो त लाग्दैन। सुरुमा 'ब्याच नम्बर १६' मा मैले किस सिन गरेकी थिएँ। त्यो सुट गर्दा पनि मलाई एक सय दुई डिग्री ज्वरो आइरहेको थियो। गर्न त मन थिएन। तर, फिल्मको रोल हो, के गर्ने भनेर घरमा मामुलाई पनि भनेँ। ठिकै छ नि त भन्नुभयो। अनि गरेकी हुँ। त्यो आजको समाजमा ठूलो कुरा पनि त हैन नि? यहाँ ठूलो इस्यू बनाउँछन्। न्युडकै कुरा गर्ने हो भने पनि त करिना कपुरले बिकिनी सट दिएकै छिन्। प्रियंकाले पनि त किस सिन दिएकै छिन्। त्यहाँ तिनीहरूको इज्जत गर्छन् त। हाम्रोमा हेर्नु पनि पर्ने, कुरा पनि काट्नु पर्ने। अलिक सानो सोच छ।
तपाईँको उध्रेको चोली आइटमपछि तपाइँलाई नेपाली मल्लिका शेरावतका रूपमा हेर्न थालिएको छ नि!
छ्या, हैन। कहाँ मल्लिका, कहाँ म? हाम्रो इन्डस्ट्रीले म मल्लिका भएँ भने कहाँ धान्न सक्छ र? न स्त्रिकनले सक्छ, न दर्शकले सक्छन्, न प्रोड्युसरले नै सक्छ। हाम्रोमा त्यो हुन त पहिला एउटा कलाकारले अर्का कलाकारको इज्जत गर्न सिक्नुपर्‍यो नि। त्यो छैन। उता सिनियर भनेपछि कति मान गर्छन्! यहाँ त राजेश दाइलाई नमस्ते गर्‍यो भने पनि, 'ह्या त्यो झारेलाई के नमस्ते गर्‍या?' भन्छन्। यस्तो मेन्टालिटीले पनि कहिले विकास हुन्छ र?
तपाईँको आउन लागेको 'बिन्दास' त खतरा छ रे नि?
पब्लिसिटी गर्न गरिएको प्रचार आफ्नो ठाउँमा छ। तर, त्यो फिल्ममा त्यस्तो केही पनि छैन। रिलिज भएपछि हेर्नुस्, थाहा भइहाल्छ। किस सिन, सिस सिन केही छैन। सानो एउटा बेड सिन छ। त्यो पनि डाइरेक्टरसापले लुगा खोल्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले त भन्दिएँ, 'तपाईँले ब्लु फिल्म बनाउन लागेको हो र?' सिन दिएर मात्र के गर्नु? सेन्सरले पास पनि त गर्नुपर्‍यो नि! खिच्नलाई मात्र किन सिन गर्ने?
मैले डाइरेक्टरलाई भनेँ, 'हेर्नुस म सामान्य केटी हो। मेरो मात्र टाउकोले तपाईँ करोडौँ कमाउने सपना नदेख्नुस्।'
(सुषमाले हामीलाई अन्तरवार्ता दिइरहँदा उनी निकै चन्चल देखिन्थिन्। उनी कहिले निकै नै हौसिएर उत्तर दिन्थिन्, कहिले केबल 'मलाई केही थाहै छैन' भनेर पन्छिन खोज्थिन्। टिभी स्त्रि्कनमा बडेमानको ज्यान देखिने सुषमा रियल लाइफमा 'लिन एन्ड थिन' छिन्। यही केटीले उध्रेको चोलीमा नाचेर तहल्का मच्चाएको हो भनेर पत्याउन पनि धेरै बेर लाग्यो मलाई। वास्तवमै रियल लाइफ र रिल लाइफको भिन्नताको साक्षी भइरहेको थिएँ।)
तपाईँलाई आफ्नो टाउको बिक्दैन जस्तो किन लाग्छ? 'लुट'ले ब्रम्हलुट मच्चाउनुको एउटा कारण तपाईँ पनि त हो नि।
त्यो टिमवर्क थियो। मेरो आइटमले मात्र फिल्म चलेको होइन। फिल्म वास्तवमै राम्रो थियो। अब आउने फिल्म 'वार्स'मा यो भन्दा खतरनाक आइटम गरेकी छु।
'लुट'ले एक प्रकारको चिनारी दियो नि, है?
हो। अहिले जो पनि मलाई 'उध्रेको चोली' भनेर जिस्काउँछन्। मलाई रमाइलो लाग्छ।
अब अलिकति पर्सनल कुरा गरौँ?
(उनले जिब्रो टोक्दै नखरा गरिन् ) नाइँ, पर्सनल कुरा नसोध्नुस् न। तपाईँहरू के के सोध्नुहुन्छ? मलाई भन्नै आउँदैन।
म त्यस्तो गाह्रो सोध्दिनँ। तपाईँले रिल लाइफमा धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, रियल लाइफमा पनि गर्नुभएको छ?
(उनले केही बेर लजाएको जस्तो गरिन् र खित्का छोडेर हाँस्दै जवाफ दिइन्) मेरो ६/७ महिना अघिमात्र ब्रेकअप भएको हो। छ वर्षको रिलेसनसिप थियो। तर, ब्रेकअप भयो।
छ वर्ष लामो रिलेसनसिपको बे्रकअप? किन? को कसलाई घाँडो भयो त?
(उनी फेरि मजासँग हाँसिन् ) खै, त्यो मलाई त घाँडो भएको थिएन। म नै उसलाई घाँडो भएँ हुँला। ब्रेकअप गरुँ भन्यो। ल ब्रेक अप भने ब्रेक अप भनेर भन्दिएँ मैले पनि।
तपाईँको नयाँ अफेयरको हल्ला छ नि, बजारमा?
बजारमा त के के हल्ला हुन्छ, हुन्छ। सबैको पछि लाग्नुहुन्न। छैन, मेरो त्यस्तो अफेरसफेर अहिले।
भर्खर चौबिस पुगेँ भन्नुहुन्छ। बिहे कहिले गर्ने त?
अहिले बिहे नगर्ने। पहिले हिट हुने। नाम-दाम कमाउने अनि बिहे गर्ने।
अहिले बिहे गर्‍यो भने के थाहा बुढाको घरबाट फिल्म खेल्ने प्रमिसन नदिने हुन् कि? कोही ड्रिमब्वाई छ?
ह्या, मलाई थाहा छैन। यस्तो उत्तर नै आउँदैन के मलाई।
कुनै केटाको आकृति त होला नि दिमागमा? पूरै ब्ल्यांक त होइन होला?
अग्लो, काले काले। मस्कुलर। टक्क घोडा चढेर आओस्। अनि मलाई लिएर जाओस्। हि... हि...हि...हि...
भनेपछि कसैलाई आँखा लगाइरहनुभएको छ?
कस्तो के? छ। तर, 'आई लभ यू' भनेको छैन के। भाग्यमा लेखेको मात्र पाइन्छ, देखेर पाइँदैन।
भाग्यमा विश्वास छ भनेपछि व्रत पनि बसिन्छ? के-केको?
बस्छु। तीजको, पञ्चमीको, कृष्णाष्टमीको, सोमवारको।
ए, सबै राम्रो पति पाऊँ भनेर बसिने व्रतै बस्नु हुँदोरहेछ त?
हिहिहि... राम्रो मान्छे त सबैलाई चाहिन्छ नि। तपाईँलाई चाहिँदैन?
लभ भनेको के रहेछ त? छ वर्षको अनुभवले के भन्छ?
ह्या, त्यो बच्चा बेलामा गरेको लभ के थियो के? कसले 'आई लभ यू' भन्यो त याद छैन।
अनि सेक्स भनेको के हो त?
सबैले किन यही प्रश्न सोध्छन्? मैले धेरै पटक यसको उत्तर दिइसकेँ।
म त तपाईँलाई पहिलोपल्ट भेट्दै छु। अरूलाई के के भन्नुभयो भनेर जम्मा पारेर छाप्ने भए यहाँ आएको के मतलब?
अस्ति एउटा पत्रिकालाई त मैले, 'दाल-भात-तरकारी' भनिदिएँ। त्यतिखेर मेरो अगाडि रेखा दिदीको इन्टरभ्यु थियो। सेक्सले लभलाई अझ डिप बनाउँछ भन्छन्।
भन्छन् मात्र? तपाईँको छ वर्षे प्रेमकाल धेरै डिप भएकोले छुटेको कि, डिप नै नभएकोले?
(उनले नमजासँग जिब्रो टोकिन् र भनिन्) 'इन्टरभ्यू सकिएन? मेरा साथीहरूले बोलाको बोलाई छन्।'
अन्तिम प्रश्न। नेपाली राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो पाताल प्रवेश गरेको छ।